Paositra Andranonahoatra Manjavozavo ny fahaverezan’ilay 100 tapitrisa ariary
« Mbola manjavozavo tanteraka ny fahavakisan’ny biraon’ny paositra izay nahaverezana vola be 100 000 000 Ariary hatreto», hoy ny mpitandro filaminan’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena Itaosy.
Araka ny fanampim-baovaon’ny zandary hatrany : «Nandritra ny fanadihadianay ireo mpanao lalana sy mpiasam-panjakana eo amin’ny manodidina ary ny mponina eo an-toerana dia samy nilaza izy ireo fa tsy nahatsikaritra olona niditra tao amin’io toerana io. Mbola eo am-pikarohana izay tena atidoha nikotrika hatreto fa ampintaina amin’ny mahamety azy ny vaovao.»
Raha tsiahivina, araka ny fampitam-baovao ofisialin’ny zandarimariam-pirenena eo Ankadilalana, voalaza fa nisy jiolahy niditra an-tsokosoko tao amin’ny biraon’ny Paositra Andranonahoatra ny alarobia faran’ny volana jolay teo. Nampandre ny zandary teny amin’ny faritra ny mpiambina sahabo ho tamin’ny 5 ora sy fahefany hariva. Nidina nanatanteraka ny fizahana ifotony avy hatrany ny zandary eo amin’ny Borigady Itaosy. Manodidina ny 100 tapitrisa ariary no vola nanjavona raha ny filazan’ny mpiasan’ny paositra.
Nibanaka ny varavarana
Misy “camera de surveillance” eo amin’io biraom-panjakana io fa saingy tsy mitahiry sary izany. Efa lasa nody tamin’ny 4 ora sy sasany avokoa ny mpiasa rehetra. Nivoha ny varavarana kanefa tokony ho nihidy “vérouillée” niaraka tamin’ny birao. Voalaza tamin’izany fa olon-droa no niditra tao nefa tsy nisy naheno. Ny fitohizan’ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana no hamaritra ny tena zava-misy marina.
Voalaza fa nisy olon-droa niditra tao amin’ny paositra Andranonahoatra - Itaosy kanefa tsy nisy nahatsikaritra izany